Cidda noqonaysa madaxweynaha Hirshabeelle oo Heshiis laga gaarey | Wardoon
Home Somali News Cidda noqonaysa madaxweynaha Hirshabeelle oo Heshiis laga gaarey
Cidda noqonaysa madaxweynaha Hirshabeelle oo Heshiis laga gaarey
Beelaha Xawaadle iyo Abgaal ayaa xogihii ugu dambeeyey sheegayaan inay heshiis ka gaareen cidda noqon doonta madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, kadib khilaaf ka dhex aloosnaa muddooyinkii ugu dambeeyey.
Beesha Xawaadle ayaa xogihii ugu dambeeyey sheegayaan in lagu qanciyey in caasimadda Hirshabeelle loogu celin doono gobolka Hiiraan ayna afartii sanaba mar qaataan madaxweynaha Hirshabeelle, waxaana sidoo kale taas ogolaaday Cali Guudlaawe iyo duubabka dhaqanka.
Siyaasiin, Ugaaska Beesha Xawaadle, guud ahaan odayaasha dhaqanka ee HirShabeelle iyo Cali Guudlaawe ayaa heshiiskaan wada ogolaaday, waxaana lala wadaagey oo golaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Tallaabadaan ayaa waxa ay taabagelinaysaa qorshihii Villa Somalia ee ahayd inay madaxweynaha Hirshabeelle ka dhigaan beesha Abgaal isla markaana si aysan beeshu arrimaha awood qaybsiga awgood ugu tartamin doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya.
Previous articleDAAWO:- Guddiga Doorashada Xildhibaanada BFS Ee Somaliland oo lamagacaabay
Next articleMaamulka Tigree-ga Itoobiya oo 3 Jiho laga weeraray
Rooble safar dhulka ah ku tagay degmada Balcad +SAWIRRO
Galmudug oo laga xusay 26-ka Juun +SAWIRRO